Garoowe : TPEC oo ku dhawaaqday Mudo kordhinta Xilliga qabashadda araajidda Musharaxiinta Deegaamadda Puntland (Warsbixin + Dhagaysi). | Sahan radio
Garoowe : TPEC oo ku dhawaaqday Mudo kordhinta Xilliga qabashadda araajidda Musharaxiinta Deegaamadda Puntland (Warsbixin + Dhagaysi).
Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa kordhiyay mudada qabashada Codsiyada Musharaxiirta Ururadasiyaasadeed ee doorashada golayaasha deegaanka Puntland,iyadoo ay hore u shegeen in ay ku ekayd 11 bisha May qabashada araajidda Musharixiinta Golayaasha degaamadda .
Axmed Maxamed (Dubays) oo xubin ka ah guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay6 xarunta guddiga ee magaalada Garowe ayaa ku dhawaaqay in guddigu uu mudo 15 maalmood ah ku daray xilligii kama damabaysta ahaa ee qabashada araajida Musraxiinta ururada Siyaasadeed ee doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Dubays wuxuu carabaabay in markii hore guddigu uu iclaanshay mudo maanta ku ekayd maanta oo horay ururada iyo dadweynahaba loogu wargaliyay in wixii ka horeeya ay soo xareeyaan araajidooda la xiriirta doorashooyinkaasi.
Axmed Maxamed (Dubays) wuxuu ku dhawaaqay in guddigu uu isku raacay in mudo 15 maalmood ah lagu daro mudada qabashada raajida Musharaxiinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland oo ku eg 26-ka Bishan May sanadkan 2013-ka.
Dubays wuxuu sheegay in guddigu uu talaabadan qaaday isagoo tixgalinaya Codisyada kala duwan ee Ururada uga imaanaya, Wadahadalada Ururada iyo guddiga wali u socda, Hawsha Culus ee ururada u taal, Waqtiga oo kooban iyo arrimo kaloo farabadan.
Arrintani waxay imaanaysaa iyadoo deegaanada Puntland laga dareemayo abaabulo kaladuwan oo la xiriira u diyaargarawga Ururada iyo Bulshadaba ee doorashooyinka Golayaasha deegaanka ee Puntland ee inagu soo wajahan kuwaas oo aad loo saadaalinayo in si nabad ah oo xalaal ah ay ku dhacaan.
Halkaan ka dhagayso Codka Axmed Maxamed Dubays.